Abavelisi beebhegi zokuHamba & abaThengi -iFektri yokuFumaneka kweNgxowa yeThailand
Imithwalo yezandla, ibhegi yokuhamba umgama omfutshane, ibhegi yokuthwala eyomeleleyo
Umhlaba awungowokubona, kodwa wokuhamba. Isikhwama sokuhamba esinemfashini kunye nefashoni senziwe ngesambatho esikhethiweyo esinemveliso ekumgangatho ophezulu, esinokunganyani, ubushushu obuphezulu, ukuphefumla kunye nokukhululeka. Uyilo olunomthamo omkhulu lunokugcina inani elikhulu lezinto ezinje ngokunxiba iimpahla zobuqu, iikhompyuter, iifowuni eziphathwayo, iiambrela, njl. Njl., Kwaye ingxowa engaphezulu ye-zipper inokugcina iifowuni eziphathwayo, iicomputer zetafile ixesha.
Isikhwama esikhulu sokuhamba somthwalo omkhulu wokuhamba esikhwameni somthwalo
Siyakholelwa ukuba abakhweli banokuthatha iindiza ezininzi ezahlukeneyo ngexesha lokuphila kwabo. Ke ngoko, siyile le khabhathi yokugqibela evunyiweyo yikhabhathi, ngoko yamkelwe uninzi lweenqwelo moya eUnited Kingdom, eUnited States naseYurophu.
Isingxobo esiqhelekileyo sendlela yokuthatha umthwalo omncinci kunye nebhegi ezimeleyo yokuma kwesihlangu kunye nengxowa emileyo yokwahlulwa kwezemidlalo
Ilula kwaye iyaphatheka: ibhegi yokuhamba yezemidlalo yenziwa ngezinto ezenziwe ngexabiso eliphakamileyo le-oxford, ziziva zikhululekile, zinobunzima, azinakuzikhusela, zingakwazi ukumelana nezinto ezingafunisi manzi nokuhamba kwamanzi. Yenziwe ngengxowa enkulu enomthamo omkhulu, ibhegi enamanzi neyodwa eyomeleleyo kunye nengxowa yezihlangu ezahlukileyo, ezinokugcina ngokulula ibhegi nganye. Izinto ezahlukeneyo zokuhamba.
Isingxobo sezemidlalo sokuzilolonga esingenawo amanzi isikhwama esincinci sokuhambisa umthwalo ibhegi enkulu yomthwalo we yoga
Uyilo lwangaphakathi olwenziwe ngobukhulu, olunokugcina luze luthwale iimpahla, iifowuni eziphathwayo, iikhompyuter, itshaja, njl njl., Ukukhululeka ngakumbi ukusebenzisa kunye nolawulo olungcono lwezinto. Ukusetyenziswa kwe-zippers ezikumgangatho ophezulu, uyilo oluphindwe kabini lwentloko, ukuvulwa ngokutyibilikayo kunye nokuvala, akukho lula ukuba ziingqwebe. Ukuthwala intambo ekhululekile, efanelekileyo kwaye efanelekileyo. Ukomelela okuphezulu kunye nokunxibelelana kweplasitiki okunamandla, okuhlala ngakumbi.
Isingxobo samanzi sokuhambisa okungabinamanzi okuhambisa amanzi kunye nabasetyhini ingxowa enkulu egxunyekwe ibhegi enkulu ezimeleyo
Isingxobo esihle sokuhamba, ubungakanani bomthwalo ophethe iibhegi zesandla kubalulekile. Ubude beqhina lesandla kule bag yokuhamba bufikelela yonke indlela ukuya ezantsi kwengxowa, iguqula amandla adonsela kwisiqingatha somzimba wengxowa, engomelelanga kwaye yomelele kodwa iphinde inyuse umthamo wengxowa.